TD Ameritrade dia mampirisika ny Bitcoin Blockchain - Blockchain News
Aprily 25, 2018 Admin
TD Ameritrade dia mampirisika ny Bitcoin Blockchain
TD Ameritrade namboly ny marika ASCII saina – izay, soritra ny dokam-barotra – amin'ny Bitcoin ny blockchain tamin'ny fiandohan'ity volana ity.
Ny tserasera broker nanambara fa naniraka 68 Bitcoin varotra mba hamoronana nomerika sainam-pirenena sy ny famantarana ny Bitcoin blockchain.
Noho ny toetry ny blockchain, izao saina izao mandrakizay voatahiry ao amin'ny cryptocurrency ny masiaka natao tamintsika.
“Tianay fitadiavana fomba vaovao hampiasa ny teknolojia mipongatra. Noho izany dia nanapa-kevitra ny hanana kely mahafinaritra sy hamboleko ny saina. Okay – ara-teknika, dia nandinika lalina izany,” Hoy ny broker.
“Mirehareha izahay mba ho anisan'izy io. mandrakizay,” nanoratra ny broker.
Blockchain News 20 Janoary 2018
Hampijanona mandrakariva t ...
Ao amin'ny firenena samy hafa, Mety tsy hitovy ny vidin'ny bitcoin
Nahoana no samy hafa cou in ...
Manomana Mercedes Crypto Coin mba hamaly soa Eco-Mitarika
Daimler, ny Alemana ...
Previous Post:Iran fomba ofisialy mandràra fampiasana cryptocurrencies
Next Post:Ny Arizona House solontena vato fa ny hetra amin'ny vola azo cryptocurrency
Mey 7, 2018 amin'ny 4:13 PM
Mey 29, 2018 amin'ny 9:14 PM